विपद्का सारथी! कुनै घटना हुन्छ आफै खटनु हुन्छ, सयौंको उद्धार | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार विपद्का सारथी! कुनै घटना हुन्छ आफै खटनु हुन्छ, सयौंको उद्धार
२०७८, ३० आश्विन शनिबार ०७:३१
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको उत्तरी भेक अनि हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा अनेकन प्राकृति विपत्ती दुघर्टना हुन्छ ।
ती प्राय सबै अप्ठेरो परिस्थितिमा साथ पुग्ने नाम हो इन्द्रसिंह शेरचन । बाढी पहिरो तथा अन्य बिपद्का घटना भए अग्रपंक्तिमा पुग्न उहाँलाई कसैले पठाउन पर्दैन । उहाँ जानकारी पाउँदासाथ सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिनुहुन्छ र तुरुन्तै उद्धारमा खट्ने उहाँको कुनै वेतनभोगी कर्मचारी भने हैन ।
मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनका अनुसार शेरचन सामाजिक कार्यमा सँधै खट्ने व्यक्ति हो र उहाँले आफ्नो भन्दा पनि समाजका जो कसैलाई पनि अप्ठेरो परको ठाउँमा पुग्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ब्यक्ति हो ।
नाउरीकोटका शेरचन आफ्नो क्षेत्रमा पनि पहिल्यैदेखि सामाजिक संघसंस्थाको अगुवाइ गर्नुका साथै अन्य गतिबिधिमा पनि सक्रिय सहभागिता जानाउने खालको व्यक्ति रहेको तुलाचनको भनाई छ ।
बेनी–जोमसोम सडक खण्डमा हुने सबैखाले विपद्का सारथी शेरचनले उक्त सडक खण्डमा यात्रा गर्ने तीन हजार भन्दा बढी यात्रुलाई पिठ्युँमा बोकेरै सडक पार गराउने काम गर्नुभएको छ । वर्षात्को समयमा सडक अबरुद्ध हुँदा शेरचन अहोरात्र समस्यामा परेका नागरिकको उद्धारमा खट्ने गर्नु हुने नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका पूर्व अध्यक्ष सुरत के.सी.को भनाई छ ।
गएको संविधान दिवसमा विभुषण दिलाउनका लागि जिल्लाबाट नाम सिफारिस गरिएको भए पनि त्यो बखत शेरचनको नाम सूचिमा नपरेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडलले बताउनुभयो ।
पौडेल भन्नुहुन्छ सामाजिक क्षेत्र र बेनी–जोमसोम सडक खण्डमा हुने कुनै पनि बिपत्तीमा अग्र पंक्तिमा खट्ने सामाजिक अगुवा हुनुहुन्छ शेरचन, उहाँलाइ समयले उचित सम्मान पक्कै देला । प्रत्येक पटक जहाँ अप्ठेरो पर्छ त्यहाँ पुग्ने शेरचनको विशेषता नै हो प्रजिअ पौडेलको भनाई छ ।
२०७६ माघ १६ गते अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको खोप्रा क्षेत्रमा चार जना अन्तरिक पर्यटक पदमार्गमा बाटो बिराएर हराउँदा शेरचनले नै अग्रपंक्तिमा खटेर उद्धार गर्नेकार्य भएको तत्कालीन म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकाल बताउनुहुन्छ । हाल रक्षा मन्त्रालयमा उपसचिवका रुपमा कार्यरत ढकाल भन्नुहुन्छ शेरचनले बेनीजोमसोम सडक खण्डमा भएका दुर्घटनाको पनि पहिलो सूचना दिने व्यक्ति शेरचन नै हुनुहुन्थ्यो ।
धौलागिरी हिमालमा विदेशी नागरिक हराउँदा शेरचनले अगुवाइ गरेरै उद्धार गर्नुभएको थियो भने अहिले धौलागिरी तथा अन्नपूर्ण आधार सिबिरसम्म पर्यटक तथा उनीहरुको सामग्री पुगाउनकालागि समेत खट्ने गर्नुभएको छ ।
सरकारले सुरु गरेको कोभिड भ्याक्सिनेसन कार्यक्रममा मुस्ताङ लैजानु पर्ने भ्याक्सिन बेनी जोमसोम सडक अबरुद्ध हुँदा शेरचनले पिठ्युमै भ्याक्सिन बोकेर मुस्ताङ पठाउनु भएको स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका निमित्त प्रमुख टीकाराम भण्डारीले बताउनुभयो । भण्डारी भन्नुहुन्छ शेरचनले सहयोग नगर्नुभएको भए सायद मुस्ताङमा भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमलाइ नै असर पर्ने थियो ।
बेनी जोमसोम पाइलट ट्रयाक खुले सँगै २०६७ को दशैंमा काभ्रे भिरमा धेरै व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको जीप दुर्घटना हुँदा पनि शेरचनले उद्धारको कमाण्ड सम्हाल्नु भयो ।
मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२, नाउरी कोट घर भै हाल उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा मुस्ताङ लेते होटल सञ्चाल गर्नुभएका शेरचनले आठ जनालाई रोजगारी पनि प्रदान गर्नुभएको छ । शेरचनको होटलमा अहिले आठ जनाले रोजगार पाई रहेका छन् । शेरचन आफै पनि खट्नुहुन्छ भने उहाँले भारतको दार्जलिङ घर भएका निमा लामालाई कुकको रुपमा राख्नु भएको छ ।
निमाका चार सन्तान अनि श्रीमान श्रीमती गरी छजना शेरचनकैमा बस्ने गर्दछन् । त्यस्तै म्याग्दीकै मंगला गाउँपालिका–१ पुर्णगाउँका राजु पाण्डे अर्को कुकका रुपमा रहनुभएको छ । राजुको परिवारका पनि तीन जना होटलमै कार्यरत छन् । किचन सहयोगीका रुपमा इन्द्र सिंह शेरचनकै परिवारका अन्य सदस्यहरु पनि रहेका छन् । १३ जना अहिले शेरचनको होटलमा आश्रित भए पनि आठ जनाले पूर्ण रोजगार पाएका छन् भने अन्य पाँच जना स्कुल पढ्ने बालबालिका रहेका छन् । पाँच जना बालबालिकालाई पनि शेरचनले नै पढाउने गर्नुभएको छ ।
शेरचन २०६३ सालमा मुस्ताङको नाउरीकोटबाट म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा आएर मुस्ताङ लेते होटल एण्ड रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न थाल्नु भएको हो । ०६३ देखि ०७१ सम्म बेनीमा होटल सञ्चालन गरेका शेरचनले एक वर्ष पोखरामा पनि व्यवसाय गर्नुभयो । त्यस पछि २०७४ मा पुनः म्याग्दीको उत्तरी भेक अन्नपुर्ण गाउँपालिका–३ दानाबाट आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । मुस्ताङ लेते होटल एण्ड रेष्टुरेन्ट उहाँको ब्राण्ड जस्तै छ । बेनी–जोमसोम–कोराला सडक खण्ड अन्तरगत पर्ने दानामा रहेको उहाँको होटल सडक खण्ड क्षेत्रमै उत्कृष्ट मानिन्छ ।
तीन सन्तानका पिता शेरचनले एक छोरी र एक छोराको विवाह गर्नु भएको छ भने एउटा छोरी अहिले पोखरामा छिन् । शेरचनका छोरा पनि पर्यटन व्यवसायमै केन्द्रीत हुनुहुन्छ भने विवाह भै सकेकी जेठी छोरी पनि पर्यटन व्यवसायमै केन्द्रीत हुनुहुन्छ source gorkhapatraonline
Previous articleसाफ च्याम्पियनशीप उपाधिका लागि आज नेपाल र भारत भिड्दै
Next articleदशैँ टीकाको दोस्रो दिन आज पनि टीका थापेर आशीर्वाद लिइँदै